महिला केन्द्रिय सहकारी संघको आवश्यकता छ « Sahakari Nepal
महिला केन्द्रिय सहकारी संघको आवश्यकता छ
प्रकाशित मिति : 18 March, 2015 7:40 am
निर्मला श्रेष्ठ ः लेखा समीति सदस्य (जिल्ला सहकारी संघ काठमान्डौं)
१. हालै सम्पन्न जिल्ला संघको निर्वाचनमा फेरिपनि वामपन्थिहरुले नै बाजी मारे नि ? यो कार्यकालमा एलाईन्सको. उपस्थितिलाई कसरी आँकलन गर्न सकिन्छ ?
पक्कैपनि वामपन्थिहरुले बाजी मारेका छन् । यो स्वभाविक पनि हो, लामो समयदेखी वामपन्थिहरुले राज गरेको ठाउँमा यसपाली हामीले लडेरै थोरै भएपनि आफ्नो उपस्थिती जनाएका छौं । निश्चयपनि संख्याकै आधारले पनि उनीहरुले हामीलाई पेलेर जान अवश्य खोज्नेछन् । तर हामीले सहकारी क्षेत्रलाई वामपन्थिकरण हुनबाट रोक्नलाई नै एलाईन्सको स्थापना गरेका हौं । जिल्ला सहकारी संघ काठमान्डौलाई सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर काम गर्न दिने छैनौं । हामी हाम्रो धार भन्ने भन्दापनि सहकारीको आफ्नै धारमा सहकारी हिँडोस भन्ने चाहना राख्दछौं र त्यसका लागि हामी सङख्याले न्यून भएपनि संघर्ष गरिरहने छौं ।
२.तपाई एक महिला सहकारीकर्मी, लामो समयदेखी सहकारी अभियानमा क्रियाशिल हुुनुहुन्छ, भन्दिनुहोस सहकारी अभियानले महिला सशत्तिकरणमा कत्तिको भूमिका खेलेको छ ?
निश्चय नै सहकारी अभियानले महिला सशत्तिकरणमा एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । हामी नेपाली नारी सबैभन्दा मुख्य कुरो त सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणले नै पीछडिएका हौं । तर सहकारी अभियानको कारणले महिलाहरु समूहमा बसेर बहस गर्न सक्ने भएका छन् । अझ मुख्य कुरो त सहकारीहरुले महिला लक्षित गरेर विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गर्नाले धेरै महिलाहरु आर्थिक रुपमा स्वावलम्ब बनेका छन् र मलाई लाग्छ यदि सबै महिलाहरु आर्थिक रुपमा स्वावलम्ब बन्न सकेको खण्डमा मनोवैज्ञानिक रुपमै उनीहरु दरो हुनेछन् र सीप र क्षमता भएको खण्डमा कुनैपनि निर्णायक तहमा जानलाई स्वतः बाटो खुल्ला हुनेछ ।
३.समग्र राष्ट्रिय सहकारी अभियानमा महिला सहकारीकर्मीको भूमिकालाई प्रष्ट्याईदिनुहोस न ?
सहकारी क्षेत्रमा सदस्यताको हिसाबले हेर्ने हो भने महिलाहरुको उपस्थिती सङख्यात्मक रुपमा पुरुषहरुकोभन्दा ज्यादा पाईन्छ, महिला सहकारीहरु पनि थुप्रै खुलिसकेका छन् तर यर्थाथमा महिलाहरु प्रयोग भईरहेका छन् । उत्साहका साथ महिलाहरु सहकारी क्षेत्रमा लागेता पनि उनीहरुलाई खुल्ला रुपले बाटो खोलिएको अवस्था छैन् । त्यसकै परिणाम स्वरुप महिलाहरु सहकारी अभियानमा केन्द्र स्थानमा झुल्कन सकेका छैनन् । अलिअलि छिटपुट देखिएका अनुहारहरु आरक्षणभित्र परेर आएका हुन् । तर्सथ क्षमता हुँदाहुदैपनि महिलाहरु अन्य क्षेत्रमा जस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि पर्दा पछाडि नै छन् ।
४. तपाइहरुले धेरै पहिलेदेखी महिला सहकारीहरुको केन्द्रिय संघ चाहिन्छ भन्दै आइरहनुभएको छ, किन आवश्यक छ महिलाको अलग्गै केन्द्रिय संघ ?
हो, हामीले धेरै पहिलेदेखी यसको लागि पहल गरेका हौं तर सहकारी ऐनले नै लैङिगकताको आधारमा संघलाई बन्देज गरेको रहेछ । जुन एकदम अस्वभाविक छ । यहाँ तरकारी उत्पादक केन्द्रिय संघ हुँदाहुँदै प्याज संघ चाहिँ हुन हुने, तर देशभर यति धेरै महिला सहकारीहरु छन्, उनीहरुले आफ्नो छुट्टै संघ नपाउने यो अचम्मको कुरो छ । महिला सहकारीकर्मीहरुलाई एकताबद्ध गरी उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सहकारी अभियानको केन्द्रिय भूमिकामा आरक्षितभन्दा बढि महिलालाई समावेश गराउन पनि महिला केन्द्रिय संघको आवश्यकता छ ।
५.ऐन संसोधनको संघारमा छ भनिन्छ नि , संसोधित ऐनमा यसलाई सुरक्षित गर्न सकिएला नि त ?
ऐन संसोधनको हल्ला चलिरहेकै छ र हामी पनि यसकै पर्खाइमा छौं । संसोधित ऐनमा महिलाहरुको अलग्गै केन्द्रिय संघ खोल्न पाउने प्रावधान हुनुपर्छ । हामीले सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई यस विषयमा पटक पटक भनिराखेकै छौं । उहाँहरु सकारात्मक देखिनुहुन्छ । तर मुखले हुन्छ भन्ने र व्यवहारमा उल्टो गर्ने परिपाटी हामीकोमा छ, ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन् । यसको सुनिच्तिताको लागि हामीले देशभरका महिला सहकारी संस्थाबाट हस्ताक्षर संकलन फेरि पनि बुझाउने छौं र विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम पनि गर्ने छौं । अन्त्यमा नजिकिँदै गरेको राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण सहकारीकर्मी साथीहरुलाई सहकारीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा डोराउन आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी लिनुहुन आग्रह गर्दछु ।